Golaha Ammaanka ee QM oo cuno qabataynta hubka ee Eriteriya maanta qaadaya – Radio Daljir
Nofeembar 14, 2018 5:13 b 0
Golaha Ammaanka ee QM ayaa maanta oo Arbaco ah yeelan doona kulan gaar ah oo xayiraadda looga qaadayo wadanka Eriteria oo cunoqabatayn uu kusoo rogay golaha sanadkii 2009kii, qaraar tirsigiisu ahaa 1907, iyadoo lagu soo rogay xayiraado safarada ah, hubka iyo dhaqaalaha oo la xanibay.
Sidoo kalle Golaha Ammaanka ee QM ayaa badali doona guddiga gaarka ah ee la socodka hubka Soomaaliya iyo Eriteriya ee SEMG oo loo badali doono quburo arrimaha Soomaaliya si dhow ula socota.
Heshiiskii dhexmaray dowladaha Itoobiya iyo Eriteriya ayaa soo afjaray colaad muddo 20 sano u dhaxaysay labada dal, waxaana qorshaha xayiraadda looga qaadayo Eriteriya dawada ka riixaya Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaasi oo ku heshiiyay iskaashi dhinacyada horumarinta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee gobolka.
Eriteriya ayaa cuno qabatayn la saaray kadib eedayn loo soo jeediyay oo ahayd inay taageerto hub iyo dhaqaalana ku bixiso Al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda faderaalka Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya.
Laakiin Jabuuti ayaa qoraal ay u diray Golaha Ammaanka 11 Julay waxaa ay ku baaqday si dhow in looga wada shaqeeyo in lasoo afjaro muranka dhuleed ee kala dhaxeeya Eriteriya , taasi oo ku salaysan gacanka Ras Dumayra oo labada dowladood ay isku haystaan, waxaana Golaha Ammaanka uu gogol u dhigay Eriteriya inay qayb ka qaadato soo afjarka muranka kala dhaxeeya wadanka Jabuuti ee dhanka dhulka ah, iyadoona labada dowladood hadda kulamo horay ay u yeesheen.